बिवाह हुँदै थियो तर सदाको लागि अस्ताइन् पुनम ! – Dainik Sangalo
बिवाह हुँदै थियो तर सदाको लागि अस्ताइन् पुनम !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: ११:४८:४७
झारखंडबाट एउटा दुखद समाचार आयो। जहाँ घरमा विवाहको खुशी शोकमा परिणत भयो। २३ वर्षीया पूनम कुमारीको विवाहको तयारीहरू घरमा तीव्रताका साथ चलिरहेका थिए। घरमा हल्दीको समारोह पनि राम्रोसँग भएको थियो। छोरीको विवाहबाट परिवार अत्यन्तै खुसी थिए। तर केहि समय पछि दुलही पूनमको सर्पको टोकाई बाट निधन भयो।
पूनम बीएसएस महिला कलेजकी छात्रा थिइन। उनको विवाह हुँदै थियो जसको बारेमा घरमा खुशीको वातावरण रहेको थियो। तर परिवारका सदस्यहरू सोकमा डुबेका छन्।
गाउँलेहरू भन्छन कि बर्षा यामको कारण साँप मान्छेहरूको घर आउँदछ। यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै मानिसहरू सर्पको टो-काइले म-रेका छन्। पूनमको मृ,त्यु,पछि यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण त्रसित र सोकमा डुबेका छन्। मानिसहरू डरले निदाइरहेका छैनन्। यस छेत्रका वरपरका क्षेत्रबाट धेरै घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। प्रशासनले लगातार मानिसहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ।
Last Updated on: August 28th, 2021 at 11:48 am